စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၇၉ ) ( နိုင်ငံသား မဟုတ်လဲ မဲပေးခွင့် ရပါတယ် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၇၉ ) ( နိုင်ငံသား မဟုတ်လဲ မဲပေးခွင့် ရပါတယ် )
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၇၉ ) ( နိုင်ငံသား မဟုတ်လဲ မဲပေးခွင့် ရပါတယ် )
Posted by Foreign Resident on Feb 4, 2015 in Think Different | 36 comments
အမှတ်တရလေး ဖြစ်သွားအောင် ပြောခဲ့ချင်လို့ပါ ။
သြဇီမှာတော့ နိုင်ငံသား မဟုတ်လဲ မဲပေးခွင့် ရပါတယ် ။
သြဇီ မှာ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် Permanent Resident ရထားတဲ့ ၊
ဓနသဟာယ Commonwealth အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံက နိုင်ငံခြားသားတွေ ၊
( ဥပမာ ။ ။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသားတွေ ) သြဇီမှာ မဲပေးခွင့် ရှိပါတယ် ။
ကိုယ့် အပေါ် နှင့် ကိုယ်နေတဲ့ ဒေသ ရပ်ရွာ အပေါ် မှာ ၊
ဘယ်လို စည်းမျဉ်း ဥပဒေတွေ ထားကြမယ် ၊
ဘယ်လို အုပ်ချုပ်ကြမယ် ဆိုတာ ကို ၊
နေထိုင်သူတွေ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရှိတာဟာ ၊
ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ အခြေခံ ပါဘဲ ။
မြန်မာ့ မြေပေါ်မှာဘဲ မွေးခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ ဟာ ၊
မြန်မာနိုင်ငံ ကို သစ္စာ စောင့်သိမယ် ၊
မြန်မာနိုင်ငံ ကို ချစ်ခင် မြတ်နိုးမယ် ဆိုရင် ၊
၁ ။ ဘင်္ဂါလီတွေ ကို နိုင်ငံသား ပေးတာ ၊
၂ ။ ဘင်္ဂါလီတွေ ကို မဲပေးခွင့်ပြုတာ ကို ထောက်ခံပါတယ် ။
မြန်မာပြည်မှာ လူကြိုက်နည်းမယ့် စကားတွေဆိုတာ သိပ် သိတာပေါ့ ။
ဒါပေမယ့် ၊ မတတ်နိုင်ဘူးရယ် ။
ကျနော်က ၊ အဓိက က ၊
တရားမျှတမှု ၊ ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကိုဘဲ ကြိုက်တယ် ။
ကျနော် ကံကောင်းတာ တစ်ခုက ၊
ကျနော် ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ရဲ့ အနှစ်သာရ ဖြစ်တဲ့ မေတ္တာတရား ကလဲ ၊
တရားမျှတမှု ၊ ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကို ၊ မ ဆန့်ကျင်ဘူး ။
နောက်တစ်ခု တွေးဆဖို့ ထောက်ပြချင်တာ တစ်ခု က ။
” တကယ်တော့ ဒီ ယာယီသက်သေခံ လက်မှတ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့
၁၉၉၃ ကစ အရင် စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ သုံးခေါက်ချိုးလို့ ခေါ်တဲ့ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် နဲ့
အခြား အသိအမှတ်ပြု သက်သေခံ လက်မှတ် တစ်ခုခု ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့
အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အများစုဆီကနေ သူတို့ကိုင်ထားတဲ့ လက်မှတ်တွေကို သိမ်း၊
ယာယီသက်သေခံ လက်မှတ်တွေ ပြန်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အများစု လက်ထဲမှာ
ဘာ သက်သေခံ အထောက်အထားမှ မကျန်ရစ်ပါဘူး။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ ရိုဟင်ဂျာ- ဘင်္ဂလီတွေကို
အဲလို သက်သေခံ လက်မှတ်မျိုး အများအပြား ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ ယာယီ သက်သေခံ လက်မှတ် ဆိုတာဟာ
ယာယီ အတွက်ပဲ ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် အရင် စစ်အစိုးရလုပ်ခဲ့ပုံဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ကြာတဲ့တိုင်
အဲဒီ လူတွေကို စနစ်တကျ စိစစ်ပေးတာ မလုပ်ခဲ့ပဲ
ယာယီ သက်သေခံ လက်မှတ်ထုတ်ပေးထားပြီး နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး မပေးတဲ့အပြင်
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေကိုတောင် ကျူးလွန်ခဲ့ပါသေးတယ် ။
စည်သူအောင်မြင့် – VOA မြန်မာပိုင်း “
အဲဒီတော့ကာ နောက်ဆုံး ၊ အဖြေထုတ်ရရင်တော့ ၊
စစ် အစိုးရ အဆက်ဆက် မပြတ်မသား ၊ ဝေ့လည် ကြောင်ပါတ် ၊
လုပ်ခဲ့တာတွေရဲ့ အကျိုးဆက် ဆိုတာကို တွေ့နေရတယ် ။
ဘင်္ဂါလီတွေ ကို မြန်မာနိုင်ငံ ကို သစ္စာ စောင့်သိကြမှာလားလို့ ၊
မေးရမယ့် အချိန် ၊ တွေးဆရမယ့် အချိန် ကို ရောက်လာပါပြီ ။
တကယ်တော့ ဒီ ယာယီသက်သေခံ လက်မှတ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ သမိုင်းကြောင်းကလည်း မရိုးသားပါဘူး။ ၁၉၉၃ ကစ အရင် စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ သုံးခေါက်ချိုးလို့ ခေါ်တဲ့ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် နဲ့ အခြား အသိအမှတ်ပြု သက်သေခံ လက်မှတ် တစ်ခုခု ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အများစုဆီကနေ သူတို့ကိုင်ထားတဲ့ လက်မှတ်တွေကို သိမ်း၊ ယာယီသက်သေခံ လက်မှတ်တွေ ပြန်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အများစု လက်ထဲမှာ ဘာ သက်သေခံ အထောက်အထားမှ မကျန်ရစ်ပါဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ ရိုဟင်ဂျာ- ဘင်္ဂလီတွေကို အဲလို သက်သေခံ လက်မှတ်မျိုး အများအပြား ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
သြဇီမှာ.. ပီအာက.. မဲပေးလို့ရတာကိုလည်း.. မသိဘူး..
” Permanent residents who were already enrolled (as British subjects)
as at 25 January 1984 may continue to be eligible to vote ”
သဘောတူတယ် မတူဘူး မပြောချင်ဘူးး
လက်ခံတယ် လက်မခံဘူး မရှင်းပြချင်ဘူးး
ပြောင်စိန် အဆိုးရလက်ထက်မှာ လုပ်တဲ့ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စမို့လို့ကို မယုံကြည်ဘူးးး
ကောင်းတယ်ပြောပြော ဆိုးတယ် ပြောပြော လုံးဝကို မထောက်ခံနိုင်ဘူးးး
ဇီဇီ ရေ ။
မှန်တာကို ဝန်ခံရရင် ၊ အဘ လည်း ၊
အဲဒီ လူမျိုး ကိုရော ၊ အဲဒီ ဘာသာတရား ကိုရော ၊ မကြိုက်ပါဘူး ။
မကြိုက် တာမှ ၊ ဘယ်လောက် အထိလဲ ဆို ၊ တူးခါးနေအောင်ကို မကြိုက် တာပါ ။
အဘ အတွက် ကမ္ဘာမှာ မကြိုက် ဆုံး လူမျိုး နှင့် ဘာသာတရား ဟာ သူတို့ပါဘဲ ။
သို့သော် ၊ အဘ တို့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ရဲ့ အဓိက အနှစ်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ၊
( မေတ္တာ တရား ) ကို နှလုံးသွင်းမိတဲ့ အခါတွေတိုင်းမှာ ၊
လူသား အချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်က အားကောင်းလာပါတယ် ။
့ သြော် ၊ ငါတို့တွေလည်း ၊ ဘင်္ဂါလီ ဝမ်းတွင်းမှာ သန္ဓေ တည်မိရင် ၊
ငါတို့တွေလည်း ၊ ဒီအချိန်ဆို ဘင်္ဂါလီလေး တွေ ဖြစ်နေမှာဘဲလေ ။
( ကံအကြောင်းဖန်လို့ ရောက်လာခဲ့ရတာဘဲကွယ် ၊ ရွေးခွင့်ရခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ )
အဲ့ဒီ အခါကျရင်ကော ၊ ငါတို့တွေ ( ဘင်္ဂါလီလေး တွေ ဆိုပါတော့ ) ကော ၊
ငါတို့တွေကို နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး မပေးရင် ၊
တန်းတူ အခွင့်အရေး မပေးဘဲ ချုပ်နှောင်ထားရင် ကြိုက်ပါ့မလား ။
ဒါပါဘဲ ၊ အဓိက ကတော့ ၊ ကိုယ်ချင်းစာ တရား ထားလိုက်တာပါဘဲ ။
လူဝင်မှု ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ ရှင်းပြထားတဲ့ VDO လေး ရှိပါတယ် ။
” တကယ့် တကယ်ကတော့ ၊
အခု နောက်ပိုင်းမှ ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ ဆိုတာ မရှိပါဘူး ။
လွတ်လပ်ရေး ရ ကတည်းက အတူတွဲပါလာခဲ့တာပါ ” တဲ့ ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ ဒီ ဘင်္ဂါလီလေး တွေ ဆိုတာ ၊
ဘာသာ မတူ ၊ လူမျိုး ကွဲကြသော်ငြားလည်း ၊
အဘတို့နှင့် အတူ ၊ တစ်မြေထဲမှာ အတူ မွေးခဲ့ ၊
တစ်ရေထဲကို အတူ သောက်ခဲ့တဲ့ ညီနောင်တွေလိုပါဘဲလေ ။
နောက်ပြီးတော့ ၊ အဘ က အားလုံးကို လက်ခံနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
၁ ။ မြန်မာ့ မြေပေါ်မှာဘဲ မွေးခဲ့ရမယ် ။
၂ ။ မြန်မာနိုင်ငံ ကို သစ္စာ စောင့်သိရမယ် ။
၃ ။ မြန်မာနိုင်ငံ ကို ချစ်ခင် မြတ်နိုးရမယ် ။
၄ ။ တရားဥပဒေ ကို လေးစား လိုက်နာရမယ် ။
အဲလို ဘင်္ဂါလီလေး တွေကိုမှ ၊
့နိုင်ငံသားပေး ၊ မဲပေးခွင့် ပြုမှာပါ ။
့မေတ္တာရှင်ကြီး အဘ ဖေါ ။ ဟီ ဟိ ။
အမှန်တော့ ကျနော် က
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျနော့ တကိုယ်စာ သက်သာနေရင် ဘယ်သူဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး ကြီးစိုးတာ။
အခုတော့ ဒီ အဆိုးရ တောက်ညင်ကပ်လို့ကို …
သူတို့ ဘလောင်းဘလဲ ထိုးဇာတ် လုပ်ဇာတ်ထဲ ပါနေတဲ့ ဘယ်စကား ဘယ်ဖြစ်ရပ်မဆို မယုံတာ၊ မထောက်ခံနိုင်တာ။
ဟို ကျောင်းသား သပိတ်ကိစ္စတော့ ဘဖော နဲ့ သဘောမျှပါတယ်။
ဒီ ကိစ္စတော့ တူ ဘူးး
ပြောရမယ် ဆိုရင် ၊ အဘ လဲ သူတို့ကို တူးခါးနေအောင် မကြိုက် တာဘဲ ။
ဒါပေမယ့် ၊ ဒီ ကိစ္စက လူ တစ်ယောက် နှစ်ယောက် ကိစ္စ မဟုတ်ဘူးလေ ။
လူ တစ်ယောက် နှစ်ယောက် ကိစ္စ ဆိုရင် ၊
အဘ လဲ ငါ့ သာသနာ အတွက် ဆိုပြီး ၊
အဲဒီ လူ တစ်ယောက် နှစ်ယောက် ကို သွားသတ်လိုက်ပြီး ၊
အဘ ကိုယ်တိုင်လဲ လုပ်မိတဲ့ အကုသိုလ် အတွက် ကြိုးစင်တက်ပစ်လိုက်မယ် ။
အခု ကိစ္စ က လူ တစ်သန်း ရဲ့ ကိစ္စ ။
အဲဒီလို လူ တစ်သန်း ရဲ့ ကိစ္စ မှာ ၊
့ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး ဆိုတဲ့ အဖြေကလွဲရင် ၊
တခြား ဖြစ်နိုင်ချေ ဘာတစ်ခုများ ရှိနေသေးလို့တုန်း ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ အစိုးရ ခေါင်းဆောင် သမ္မတ နေရာကို ၊
ဦး သိန်းစိန် ဘဲ ရောက်ရောက် ၊ ဒေါ်စု ဘဲ ရောက်ရောက် ၊
ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင် ဘဲ ရောက်လာလာ ၊
့နောက်ဆုံး ၊ အဘ ကိုယ်တိုင်ဘဲ သမ္မတ တက်ဖြစ်ဖြစ် ၊
( လူစိတ် ရှိသူ မှန်ရင် ) ဒီ လမ်း ၊ ဒီ ပုံစံ အတိုင်း သွားရမှာဘဲလေ ။
( လူစိတ် ရှိသူ မှန်ရင် ) တခြားလမ်းမှ ရွေးစရာ မရှိတာလေ ။
တိုင်းပြည် ရဲ့ ကံကြမ္မာကိုယ်တိုင်က ဒီလို ဖန်လာတာကိုး ။
(၂ ။ မြန်မာနိုင်ငံ ကို သစ္စာ စောင့်သိရမယ် ။
၄ ။ တရားဥပဒေ ကို လေးစား လိုက်နာရမယ် ။)
မသိမ်းပိုက်ထားသူသာ ထာဝရ အောင်မြင်နိုင်တယ်.. ဥပမာ.. အမေစုပေါ့…
မဲပေးနိုင်ခွင့်ရတဲ့သူတွေကြတော့လည်း မဲတပြားကိုတန်ဖိုးမထားပဲ မဲမပေးကြတဲ့သူတွေ အများကြီး။
ကိုယ့်မဲတပြားကကော ဘယ်လောက်များ အရေးပါမှာမို့လို့လဲ။
လူမျိုးကြီးဝါဒကို စွဲမြဲစွာလက်ကိုင်ထားနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်လို့ရသော တည်ငြိမ်ရေးကို ဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူး။
လူမျိုးတစ်စုကောင်းစားရေးကိုဘဲ စွဲမြဲစွာလုပ်ကိုင်နေသမျှကာလပတ်လုံးလည်း ယုံကြည်အားထားရသော အစိုးရတစ်ခုဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။
ထိုအချက်နှစ်ခုတည်းနဲ့တင် ဒို့တိုင်းပြည်လဲ ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ်ဒူဝေေ၀ ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ်ဒူဝေေ၀ နဲ့ မမောနိုင် မပန်းနိုင် ဆော့မြဲဆော့နေလေရဲ့လေ။
.ထောက်ခံပါတယ်။ ယာယီကဒ် ကိုင်တဲ့လူတွေ မဲပေးတာရယ်၊ သံဃာတွေ မဲပေးတာရယ် ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါမှ ကြိုတင်မဲ ဆိုတာ လုပ်လို့ မရမှာပေါ့။
White Card တွေ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများကို ၊
့နိုင်ငံသား ပေးရမှာတဲ့ ၊ ကြံ့ဖွတ်က ဗိုလ်ချုပ် ဋ္ဌေးဦး ပြောပြီ ။
ဗိုလ်ချုပ် ဋ္ဌေးဦး ရယ် ပေးရင်လဲ သတ္တိ ရှိရှိ နှင့် အခုပေးလိုက်ပါ ။
့တော်ကြာ ငါတို့ ရဲ့ အမေစု လက်ထက်ကျမှ ပေးနေရရင် ၊
့နေရင်း ထိုင်ရင်း ငါတို့ ရဲ့ အမေစု ကို လူမုန်းနေဦးမယ် ။
သတင်းတွေကိုနှစ်ပေါက်လိုက်ဖတ်ပြီးသကာလ… (မတူတဲ့အတွေးတွေနဲ့.). သုံးသပ်လို့ရတာကတော့..
ရခိုင်ရော.. ဘင်္ဂလီရော..ရိုဟင်ဂျာရော.. အကုန်ပြည်ထောင်စုကနေခွဲထွက်မယ့်.. အခြေခံစိတ်ရှိပြီးလို့… ထင်မိတယ်…။
ခွဲထွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်အောင်က.. အချင်းချင်းကောင်တာဖြစ်အောင်လုပ်ထားရမှာလို့.. မြင်မိတယ်..။
စစ်တပ်ကနေလာတဲ့… (ဘိုချုပ်ကြီးဟောင်း)အစိုးရက.. ဒါကိုမသိစရာအကြောင်းမရှိ…။
ယူအက်စ်ဖယ်ဒရယ်စနစ်မှာ.. ပြည်နယ်တွေက.. ခွဲထွက်ချင်ခွဲထွက်လို့ရသပေါ့…။
သမ္မတလင်ကွန်းလက်ထက်(လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၁၅၀လောက်)က…ကျွန်စနစ်ကြောင့်.. ခွဲထွက်မယ့်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေစုပြီး.. ယူနီယံ(ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ)ကိုပြန်တိုက်တယ်…။
သေသေချာချာလေ့လာရင်.. ယူအက်စ်ပြည်နယ်တွေထဲ.. ဖယ်ဒရယ်က.. ပြည်နယ်တခုစီရဲ့အင်မတန်အရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာ.. အင်တာစတိတ်လမ်းကြီးတွေ.. သစ်တောကြီးတွေကို.. (သစ်ပင်အမြစ်တွေလို)ဖယ်ဒရယ်ပိုင်အဖြစ် ခြေကုတ် နေရာယူထားတာမို့… ပြည်နယ်တွေ သီသန့်ကြီးခွဲထွက်ဖို့..အင်မတန်ခက်…။
မြန်မာပြည်ဟာ.. အခုစစ်တပ်တပိုင်းအစိုးရနဲ့.. အရပ်သားပညာရှင် နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ပေါင်းပြီး.. အစိုးရဖွဲ့.. သေသေချာချာ.. နောင်အနှစ်၂၀၀လောက်လှမ်းကြည့်.. လုပ်သင့်…။
အဲလိုဖြစ်ဖို့ဆို… ၂၀၁၅မှာ.. ဒီချုပ်ကိုလူထုကြီးကမဲပေး..။ လွတ်တော်ထဲဥပဒေပြုအာဏာကိုပေး..။ ဒေါ်စုလွတ်တော်ဥက္ကဌလုပ်..။
အစိုးရက.. အခုဦးသိန်းစိန်ပဲ..။ (မြန်မာပြည်အခြေခံဥပဒေအရ.. သမ္မတက..ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သိပ်မဆိုင်..လူထုကတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်လို့မရ.)
တရားရေးမှာ.. ဒီချုပ်က.. ချိန်ခွင်လျှာညီအောင် လူထည့်…။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးက.. ခရိုနီ.. သူဌေးနဲ့ဘာသာရေးအခြေတည်တဲ့.. ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ..။
ဒီချုပ်က.. သမဂ္ဂနဲ့.. ပညာရှင်လစ်ဘရယ်တွေအခြေတည်တဲ့… ဒီမိုကရက်ပါတီ
ဒါက.. ကျုပ်ရဲ့မတူသောအတွေးတွေနဲ့.. ထွက်ချင်ရထွက်မယ့်အဖြေ…။
မြန်မာ့မြေတွေကို.. စစ်ဘိုကြီးတွေ… အစိတ်စိတ်ခွဲ.. ကိုယ်ပိုင်(ပုဂ္ဂလိကပိုင်)ယူထားတာ.. သတိထားမိတယ်…။
ဘယ်နေရာတွေကို.. ဘယ်သူတွေယူ.. ဘာတွေဖြစ်ကုန်သလည်း.. လွှတ်တော်က.. စိစစ်သင့်တယ်..။
မူရင်းရည်မှန်းချက်က..မြေ နေရာကောင်းတွေကို…ဖယ်ဒရယ်ပိုင်မြေဖြစ်ဖို့.. ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်..။
ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ကို.. .. ချစားနေတဲ့.. လူတွေက.. ရောင်တော်ပြန်ရောလွှတ်တာဖြစ်နိုင်ပါ့…။
စစ်ဘိုကြီးတွေက…… ဒီလမ်းကို..မြန်မာ့နည်းမြန်မာဟန်နဲ့.. ထွင်လျှောက်နေတယ်လို့… ထင်တယ်…။
ဪဇီမှာ နိုင်ငံသား တွေ မဲမပေးရင် ဒါဏ်ငွေရိုက်ခံ ရတယ် ကြားဖူးသေးတယ်။
အဲဒါ ကို တစ်ချို့က ဖိအားပေးပြီး မဲပေး ခိုင်းတာဟာ ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်ဘူး တဲ့။
ကျွန်မ ကတော့ ဒီ အစိုးရ လက်ထဲ ဘာဥပဒေ ဖြစ်ဖြစ် အသိမဲ့ တဲ့ စေတနာမပါတဲ့ ထင်ရာလုပ် ကိုယ်ကျိုးရှာ ဥပဒေများ လို့ ဘဲ ယူဆတာမို့
ဥပဒေပြုရေး တွေ ထက် ဥပဒေမြဲ အောင် လူပြောင်း ဖို့ ကို သာ အာရုံစိုက် စေချင်တာပါဘဲ။
အခြေခံဥပဒေပြောင်းရေး လူထု အရေး
” ဪဇီမှာ နိုင်ငံသား တွေ မဲမပေးရင် ဒါဏ်ငွေရိုက်ခံ ရတယ် ”
ဟုတ်ပါတယ် ၊ အရီးလတ် ရေ ။ ဒေါ်လှ ၇၀ လောက်ချတယ် ။
တစ်ခါတုန်းက ၊ ကျနော် သင်တန်းတစ်ခု တက်စဉ်မှာပေါ့ ။
သြဇီ ဆရာမ က သြဇီ ဒီမိုကရေစီ အကြောင်း ဂုဏ်ယူစွာနှင့် ရှင်းပြနေသပေါ့ ။
ပြီးလဲပြီးရော ၊ သြဇီ ဆရာမ နှင့် သြဇီ ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ ၊
အားသာချက် / နည်းချက်တွေကို Discuss ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ ။
အဲဒီမှာ ၊ အိန္ဒိယသူ တစ်ယောက်က ၊
သူတို့ အိန္ဒိယ ဒီမိုကရေစီ က ပိုသာပါတယ်တဲ့ ။
ဟင် ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ၊ သူတို့ အိန္ဒိယမှာ မဲမပေးချင်ရင် ၊
မဲမပေးဘဲ နေပိုင်ခွင့် ရှိတယ် ၊ ဒါဏ်ငွေ မရိုက်ပါဘူး တဲ့ ။
” ရခိုင်ရော.. ဘင်္ဂလီရော..ရိုဟင်ဂျာရော..
အကုန် ပြည်ထောင်စုကနေခွဲထွက်မယ့်.. အခြေခံစိတ်ရှိပြီးလို့… ထင်မိတယ်…။
အချင်းချင်းကောင်တာဖြစ်အောင်လုပ်ထားရမှာလို့.. မြင်မိတယ် ”
ဟုတ်ပါတယ် ၊ သူကြီး ၊ ကျနော်လဲ အဲ့လိုဘဲ မြင်ပါတယ် ။
ရခိုင် ရဲ့ နံပါတ် ၁ ရန်သူက ဘင်္ဂါလီ ဖြစ်ရင် ၊
ရခိုင် ရဲ့ နံပါတ် ၂ ရန်သူက ဗမာ ပါဘဲ ။
ဘင်္ဂါလီ တွေကို ဘာသာမတူ နှင့် ၁၉၄၂ ကိစ္စကြောင့် မုန်းပြီး ။
ဗမာ တွေကို ဘိုးတော်ဘုရား ကိစ္စကြောင့် မုန်းနေတာပါ ။
ဗမာ စစ်အစိုးရကလည်း ဒါတွေကို နောကျေနေအောင် သိထားပြီးသားပါ ။
ယာလဲ ညက်စေ ကြက်လဲ ပမ်းစေ ဆိုတဲ့ ၂ ကျပ်ကွက် သုံးနေတာပါ ။
အခုတော့ ရွှေ Gas နှင့် တရုတ်ကြီး ရဲ့ ကျောက်ဖြူ ဆိပ်ကမ်း နှင့် ၊
ရေနံ ပိုက်လိုင်း ပါ ထိုးထည့်လိုက်တော့ ၊ ၃ ကျပ်ကွက် ပေါ့ ။
ကျနော် ကြားရတာကတော့ ၊
White Card တွေ အားလုံးလောက် နီးနီးကို နိုင်ငံသားပေးမှာပါ ။
ပြသာနာက တစ်ခုဘဲ တက်နေကြတာ ။
အဲဒါက လူမျိုး နာမည် ဘင်္ဂါလီ နှင့် ရိုဟင်ဂျာ ။ ဒါပါဘဲ ။
ဒီတစ်ခါတော့ သဂျီးနဲ့ အဘဖောရဲ့ အမြင်ကိုထောက်ခံပါတယ်…
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်ပါတီမှ တောင်ပြိုကမ်းပြို နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး…
၁ ။ ကြံ့ဖွတ်ကလည်း ၃-ပိုင်းလောက်ကွဲနေတယ်…
. အစိုးရအဖွဲ့ – ကြံ့ဖွတ်ဗဟို – ခြေဥပြင်ချင်တဲ့ ကြံ့ဖွတ်အမတ်
. တပ်ကတော့ အစိုးရဘက်ကို ယိမ်းပုံရတယ်
၂ ။ ဒီချုပ်မှာလည်း လူဟောင်း – လူသစ် နေရာယူ ဖျာခင်းချင်သူတွေနဲ့…
၃ ။ ပြည်နယ်တွေမှာကလည်း လူမျိုးစွဲ ဘာသာစွဲနဲ့ မဲကွဲမည့်ပုံရှိတယ်…
. ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဝှိုက်ကဒ်တွေ မဲပေးခွင့်မရှိရင် ၊ ရခိုင်ပါတီတွေချည်းနိုင်မယ်…
. အဲဒါဆို ဘင်္ဂါလီတွေ အမျိုးကန်းပြီး ပြဿနာထပ်တက်မယ်…
. ဘင်္ဂါလီတွေကလည်း အစ္စလာမ်ဆိုတာကလွဲရင် နိုင်ငံတော်အပေါ် သစ္စာစောင့်ဘွယ်မမြင်…
ဒီကြားထဲ ဝီဝီတို့လို ဘာသာရေးအစွန်းရက်တွေက တမှောင့်… ကျောင်းသားအရေးက မငြိမ်…
ထစ်ကနဲရှိ ဆန်ဒါပြကြမယ်ဆိုတော့ … ထပ်ပြီး ကယ်တင်မခံရရင် ကံကောင်း…
လွှတ်တော်ထဲမှာ တစ်မတ်သားမရှိရင်မဖြစ် ဆိုတဲ့ အကွက်ကို နင်းထားတာလို့ မြင်မိပါ၏…
.အနည်းဆုံးတော့ နိုင်ငံသားမဖြစ်သေးဘူးလို့ နားလည်ရပါတယ်။
.နိုင်ငံသားမဖြစ်သေးတဲ့သူကို နိုင်ငံအုပ်ချုပ်စီမံဖို့အရေးမှာပါဝင်(မဲပေး)ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာ မှားပါတယ်။
.ဒီဆိုက်မှာတောင် မန်ဘာမ၀င်ပဲ ကွန်မင့်ပေးလို့မရဘူးမဟုတ်လား…
.မဲပေးခွင့်ပြုချင်ရင် အရင်ဆုံး ၀ိုက်ကဒ်တွေကို နိုင်ငံသားပေးလိုက်ရပါမယ်။
.ပေးပြီးမှ နိုင်ငံဥပဒေကို ချိုးဖေါက်ရင် တိတိကျကျအရေးယူ
.နိုင်ငံကို သစ္စာမရှိရင် နိုင်ငံသားအဖြစ်က ပြန်ရုပ်သိမ်း …
.ကျုပ်က ဒီအကွက် ကို သဘောကျနေတာ
.ဒီကောင်တွေက တကယ်တော့ လူ့အခွင့်အရေးကိုလဲ ဂရုစိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ လူသားချင်းလဲ စာနာတာမဟုတ်ဘူး။ .ဥပဒေလဲ လေးစားချင်စိတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး…။
.ဒီ ၀ှိုက်ကဒ် မဲပေးရေးက အလဲအလှယ် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်တာသက်သက်ပဲ..
.ဒါ့ကြောင့် ဒီမိုဘက်မှာ ရခိုင်သားတွေကို အပြတ်ရလိုက်တယ်
.၀ီဝီတို့ အဖေခေါ် မဲပေးခိုင်းဖို့ အခက်တွေ့သွားတယ်
.ပြောရရင် ဒီအလဲအထပ်မှာ ဒီကောင်တွေ ဂွမ်း တယ်
.၀မ်း သာ ထှာ ဟယ်……..
…အဲ … ဒါနဲ့ နေပါဦး…
.တမင်များ ဂွမ်းပြနေတာလား ……
” ယာယီ သက်သေခံလက်မှတ်ဆိုတာ
ပါဝင်(မဲပေး)ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာ မှားပါတယ်။ ”
မှန်ပါတယ် ၊ ဦးပါရေ ။
.နိုင်ငံသားမဖြစ်သေးတဲ့သူကို မဲပေးခွင့်ပြုတယ် ဆိုတာ ၊
အစီအစဉ် ရော ၊ အတွေးအခေါ် ပါ ၊ မှားပါတယ် ။
တကယ့်တကယ်ကတော့ ၊ White Card တွေကို မဲပေးခွင့် မပြုသင့်ပါဘူး ။
ကျနော် ဖြစ်စေလိုရင်းက ၊
၁ ။ White Card တွေကို ( အရင် ) နိုင်ငံသား ပြု ခွင့်ပေးလိုက်ပါ ။
၂ ။ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးမှ မဲပေးခွင့်ပြု စေချင်တာပါ ။
အခု လက်တွေ့မှာ ဖြစ်နေတာက ၊
.နိုင်ငံသား ပြု ခွင့် ပေးကိုပေးရတော့မယ့် ဘင်္ဂါလီတွေ ကို ၊
( လူကြိုက် နည်းမှာမှန်း သိနေတော့ )
့ကြံ့ဖွံ့ / စစ်တပ် ကလည်း နိုင်ငံရေး ကစားဘို့လုပ်နေတော့ ၊
ဘင်္ဂါလီတွေ ခမျာ White Card အဆင့် နှင့် ရွာလည်နေရတာ ကြာပေါ့ ။
့ကြံ့ဖွံ့ က မပေးရဲ ပေးရဲ လုပ်နေတာက အရေးမကြီးဘူး ။
ကျနော်တို့ အမေစု လက်ထက် ရောက်လာရင် ၊
တရားမျှတမှု မျက်နှာကိုဘဲကြည့်တဲ့ အမေစု က ၊
ဘင်္ဂါလီ White Card တွေအားလုံးကို နိုင်ငံသား ပေးချလိုက်မှာ ။
အဲဒီ့အခါကျရင်သာ အမေစု ကို လူမုန်းမှာ စိုးရိမ်မိပါရဲ့ ။
ဘင်္ဂါလီ တွေ နိုင်ငံသား ရမရ ကတော့ ၊ သိပ်စိတ်ထဲ မထားပါဘူး ။
အခုလို လူ့အခွင့်အရေး နှင့် ဒီမို ရေချိန် မြင့်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ ၊
ဘယ် အစိုးရ တက်တက် ၊ နှေးတာ နှင့် မြန်တာဘဲ ကွာမယ် ၊
ဘင်္ဂါလီ တွေကို နိုင်ငံသား ပေးရမှာပါဘဲလေ ။
ဘယ်သူတွေ မဲပေးခွင့်ရှိလဲ ဆိုတာထက် ဘယ်သူမှ မဲဝယ်ခွင့်မရှိရေးလုပ်တာ ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
အရင်ကခေတ်က ကြားဖူးတာတော့ နေရာရဖို့ မဲဝယ်တယ်ပေါ့။ ငွေကြေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပစ္စည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နေရာဌာနနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် စည်းရုံးပြီး ဆွဲဆောင်တာက မဲဝယ်တယ်လို့ပဲခေါ်ရမှာပါ။
ဒီတော့ ဘယ်သူတွေ မဲပေးခွင့်ရှိရှိ ဘယ်သူတွေ မဲပေးဖို့ ပျက်ကွက်တာပဲရှိရှိ တစ်ကယ်မဲပေးတဲ့လူတွေက နိုင်ငံအတွက် လိုအပ်တာ ဘာလဲဆိုတာကို ချိန်စပြီး ရွေးချယ်နိုင်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ လိုအပ်နေတာ အပြောင်းအလဲပါ။ အသစ်မဟုတ်ခဲ့ရင်တောင် အဟောင်းသွင်သွင်မဟုတ်တဲ့ ခေါက်ရိုးမကြိုးသေးတဲ့ အရာပါ
.သူ့လဲ ဆဲကြမယ့်အတူတူ စိတ်ထဲရှိတာလေး ၀င်ပြောဦးမယ်…
.ဒီဘင်္ဂါလီ ကိစ္စက ဒီလို (၀ှိုက်ကဒ်ပေးပြီး) ဇတ်မျောအောင်ဆွဲထားတာ မီးမွှေးထားတာနဲ့အတူတူပဲ..
.တကယ်လုပ်ရမှာက မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ထိုက်မထိုက် ခပ်မြန်မြန်စီစစ်
.ဖြစ်ထိုက်သူတွေကို နိုင်ငံသားစတေးတပ်နဲ့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပေး
.မဖြစ်ထိုက်သူတွေကို မဖြစ်ထိုက်ဖူးလို့ တခါထဲငြင်း….
.သူတို့ကလေးထပ်မွေးပြီး မျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကျော်လာအောင်မစောင့်သင့်ဘူး..
.စည်းရိုးအပိုင်းအခြားတစ်ခုအတွင်းမွေးဖွားလို့ အဲသည်စည်းဝိုင်းအတွင်းကလူလို့ သတ်မှတ်တာမျိုး ပဲ ဖြစ်သင့်တယ်…
.(ငါတို့ကအရင်နေရာဦးထားလို့ ငါတို့ကလွဲရင် ကျန်တဲ့သူမ၀င်ရ-ဆိုတဲ့ ကလေးကလားအတွေးအခေါ်မျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး)
.တကယ်တော့ လူဆိုတဲ့သတ္တ၀ါက အရင်းအမြစ်အားဖြင့် ကမ္ဘာသား ကမ္ဘာနိုင်ငံသား ချည်းပဲဖြစ်တယ်…
.အခြားသတ္တ၀ါမျိုးစိတ်တွေအားလုံးဆီက လုယူထားတဲ့ ကမ္ဘာကို အညီအမျှ ၀ိုင်းပိုင် ၀ိုင်းသုံးစွဲသင့်တယ်…
.ပြသနာမရှင်းချင်တိုင်း ပြောလိုက်ရင် ကိုလိုနီခေတ်ရဲ့ အမွေဆိုး ဆိုပြီး အကြောင်းပြပြနေကြတယ်
.အဲဒါ ကိုလိုနီခေတ်ရဲ့ အမွေဆိုးဆိုရင် အဲသည်အမွေဆိုးကို နှစ်ခြောက်ဆယ်ကျော်တဲ့အထိ
.လူညံ့တွေများ ကိုယ်ပြောတဲ့စကား ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်မှန်းမသိ
” .ဒီဘင်္ဂါလီ ကိစ္စက ဒီလို (၀ှိုက်ကဒ်ပေးပြီး) ဇတ်မျောအောင်ဆွဲထားတာ
မီးမွှေးထားတာနဲ့အတူတူပဲ.. .တနေ့ အကြီးအကျယ်လောင်လိမ့်မယ်.. ”
” အဲဒါ ကိုလိုနီခေတ်ရဲ့ အမွေဆိုးဆိုရင် အဲသည်အမွေဆိုးကို နှစ်ခြောက်ဆယ်ကျော်တဲ့အထိ
.အမြတ်တနိုးအမွေခံနေရသလား…ဟင် .မီတဲ့နေရာက ရှင်းလိုက်ပါတော့လား…. ”
ကျနော်လဲ အဲလိုဘဲ ယူဆတယ် ဦးပါရေ ။
တနေ့ အကြီးအကျယ်လောင်မယ့် မီးကို တမင် မွှေးထားတာဘဲ ။
လွတ်လပ်ရေး ရပြီးတာ စုစုပေါင်း ( ၆၇ ) နှစ် ရှိနေပြီ ။
ဒီ ပြသာနာ ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရှင်းခဲ့ပါတော့လား ။
ကျနော် ၊ ရှင်းရှင်း လွယ်လွယ်လေး တစ်ခု တွက်ပြမယ် ဦးပါ ။
ဆိုပါစို့ ၊ ၁၉၄၈ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ရပြီးချိန်မှာမှ ၊
ဘူးသီးတောင် ၊ မေါင်းတော မှာ မွေးခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီ တစ်ယောက် ။
၁၉၆၈ မှာ သူ့ရဲ့ သား / သမီး ကို ထပ်မွေးတယ် ထားပါတော့ ။
၁၉၈၈ မှာ သူ့ရဲ့ မြေး / မြေးမ ကို ထပ်မွေးတယ် ထားပါတော့ ။
၂၀၀၈ မှာ သူ့ရဲ့ မြစ် / မြစ်မ ကို ထပ်မွေး မှာဘဲ ။
ဘင်္ဂါလီတွေ ထဲမှာ အခုလို မြန်မာပြည်ထဲမှာ ဘိုးဘွားစဉ်စက် မြေး မြစ် အထိ ၊
့မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ က အများစုပါ ။
( လူဝင်မှု ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ ၊ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ၊
ဒီ ကိစ္စ နှင့် ပါတ်သက်ပြီး ရှင်းပြထားတဲ့ VDO လေး ရှိပါတယ် ။
” အခု နောက်ပိုင်းမှ ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါဘဲ ။
ဘင်္ဂါလီတွေဟာ လွတ်လပ်ရေး ရ ကတည်းက အတူတွဲပါလာခဲ့တာပါ ” တဲ့ )
ဒီ မြန်မာပြည်ထဲမှာ မွေးဖွားလာတဲ့ ဘင်္ဂါလီလေးတွေမှာ ဘာအပြစ် ရှိသလဲ ။
သူတို့ ဘယ်သူ့ရဲ့ ဗိုက်ထဲမှာ မွေးဖွားပါရစေလို့ ရွေးခွင့်ရှိခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ ။
အဖေ အမေ မှာ အပြစ် ရှိတယ် ဆိုရင်တောင် ၊
သား သမီး ကဆက်ခံရတယ် ဆိုရင်တောင် လွန်လှပြီ ။
အခုဟာက သား သမီး တင်မကဘူး ၊ မြေး တင်မကဘူး ၊ မြစ် အထိဖြစ်လာပြီ ။
အဲလို ဘင်္ဂါလီလေးတွေ ကိုမှ နိုင်ငံသား မပေးရင် ၊
ကျနော့် အမြင်မှာ ၊ အဲဒါဟာ ၊ လူ စိတ် မရှိတာဘဲ ။
” သူ့လဲ ဆဲကြမယ့်အတူတူ စိတ်ထဲရှိတာလေး ၀င်ပြောဦးမယ် ”
ဟဲ ဟဲ ၊ တကယ်တော့ ဦးပါ လဲ ၊ အဆဲခံရမယ့်ဘက်က ဝင်ပြောနေပုံပါဘဲ ။
ဆဲတဲ့ ကိစ္စကတော့ ကျနော်လဲ သိပ်ဂရုမစိုက်လှပါဘူး ၊ ဦးပါ ရေ ။
ပညာ အားနည်း ၊ ဆင်ခြင်တုံတရား အားနည်း တဲ့ ၊
အရိုင်းအစိုင်း ၁၀၀ က ၊ အခါ ၁၀၀ လာဆဲ လဲ ၊
ပညာရှိ ၊ သူတော်ကောင်း ၁ ယောက်က ၊ ၁ ခါ လောက် ၊
ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး လာထောက်ပြသလောက်ကို ၊ ဂရုမစိုက်နိုင်ပေါင် ။
ကျနော့် ရဲ့ ၊ အဓိက ခံယူချက် က ။
၁ ။ တရားမျှတ ရမယ် ။
၂ ။ တတ်နိုင်သမျှ ကိုယ်ချင်းစာ တရား / မေတ္တာ တရား / လူစိတ် ရှိမယ် ။
ကျနော့် အတွေးအခေါ်တွေဟာ ၊ အဲဒီ အချက်တွေ နှင့် ကိုက်ညီမှသာ ၊
ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် တစ်ဦး အနေ နှင့် ၊ သေလွန်ခါနီး အချိန်မှာ ၊
့သြော် ငါ မ တရားတဲ့ ဘက်ကနေ ၊ မရပ်တည်ခဲ့ပါလား ဆိုပြီး ၊
စိတ်ရှင်းရှင်း Confidence ရှိရှိ နှင့် သေ သွားချင်တယ် ။
မေးရမယ့် အချိန် ၊ တွေးဆရမယ့် အချိန် ….
.မေးတာကို ဖြေတဲ့အဖြေနဲ့…လုပ်ရပ်တွေ…တကယ်ထပ်တူကျပါစေ… လို့…မျှော်လင့်ရင်းးး ပေါ့…
မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရတော့.. အင်္ဂလိပ်က.. ပထမအင်္ဂလို-ဘားမင်န်းစစ်တုံးကသိမ်းထားလိုက်တဲ့.. စစ်တကောင်းနယ်အပါအ၀င်.. အခုဘင်္ဂလားပြည်ထဲရောက်နေတဲ့မြေနေရာတွေ ပြန်မပေးတော့ဘူး..။
အသိမမှားရင်.. ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာခေတ်က.. နေတဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကို.. မြန်မာတိုင်းရင်းသားစာရင်းသွင်းသမို့.. အဲဒီနယ်ကလူတွေက.. အဲဒီနယ်တွေသာပြန်ရရင်..တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ရမယ်..။
San Aung says:
. အမြင်အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘင်္ဂလီ တချို့ က တိုင်းပြည်အပေါ်သစ္စာရှိတာ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘာသာရေးချုပ်ကိုင်မှူက သိပ်အားကြီးတော့ ပညာတက် ဘင်္ဂလီ များလည်း ဘာသာရေး လွမ်းမိုးမှူကို တွန်းလှန်နိုင်မှူ နဲတာ တွေ့ရတယ်။ တဖက်ကလည်း ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှက စစ်ရေး အကြီး အကျယ် ပြင်နေတယ်။ ကမ္ဘာ ဇာတ်ခုံမှာ လည်း ISIS တွေက ဆိုးဆိုးရယ်။
. ဆိုတော့ ပညာတက် ဘင်္ဂလီ တချို့ နဲ့ ပြစ်ချက်ကင်း ဘင်္ဂလီ အချို့ ကို အလျင်အမြန် နိုင်ငံသား ပေးသင့်သလို ပြည်မ ကို ရောက် နေတဲ့ တရား မဝင် immigrants (including bengali and chinese) တွေကို လည်း အလျင်အမြန် စစ်ထုတ် သင့်တယ်။ ဒါမှ fair play ဖြစ်မယ်။ အနောက် ဖက်က လူတွေကို whitecard ပဲပေးသင့်တယ်ဆိုတာကတော့ သမင် မျက်လုံး တဖက်ကန်းနေတယ်လို့ရှုမြင်မိတယ်။ ယုံကြည်မှူ မရှိဖူး ဆိုပေမယ့် ဘင်္ဂလီ တွေဟာ IS လောက်တော့ မသောင်းကျန်းရဲဖူး။
မှတ်ချက်။ မဲပေးချင်ရင် နိုင်ငံသားအရင် ခံယူသင့်တယ်။ white card နဲ့ ကတော့ ဆောဒီးပဲ။
ဘင်္ဂလီတွေဟာ.. ရှီးယားလား.. ဆွန်နီလား.. ဘယ်ဖက်ကပိုများသလည်း.. သိချင်…
ဘင်္ဂလီမှန်သမျှ … အကုန် ဆွန်နီတွေပါ …
ဘင်္ဂလားမှာ ရှီးယားသာသနာ မထွန်းကားဘူးလေ…
စိတ်ကူးယဉ်ပြောရရင် ရခိုင်ကို ရှီးယားတွေ အင်ပို့လုပ်လိုက်…
ရှီးယားနဲ့ ဆွန်နီ သတ်ကြမှာမို့ …
OIC နဲ့ UN လည်း ပါးစပ်ပိတ်သွားလိမ့်မယ်…
ပြီးတော့မှ.. ဟိုးဖက်ကို.. လက်နက်ရောင်းလိုက်..။
Written by ခင်နွယ်ဝင်း၊ ထက်ထက်အောင်
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအရ နိုင်ငံသားစိစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို မိုးပွင့်အထူးစီမံချက်ဖြင့် အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်၍ ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် (ဝှိုက်ကတ်)များ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် နေ့ရက်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက် သတ်မှတ်လိုက်ပြီး မေ ၃၁ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ ကိုင်ဆောင်သူများအနေဖြင့် ၀ှိုက်ကတ်များကို ပြန်လည်အပ်နှံရန် အစိုးရက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
ယာယီသက်သေခံလက်မှတ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်းက ဝေဖန်သုံးသပ်မှုများ ရှိနေသည့်အတွက် ယာယီသက်သေခံ လက်မှတ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ဆက်စပ်ကိစ္စရပ်များ လေ့လာသုံးသပ် အကြံပြုရေးကော်မရှင်ကို ပညာရှင်များ၊ ပါဝင်ထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်သွားမည်ဟုလည်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဇော်ဌေးက ” ဒီကြေညာချက်အရ WC (၀ှိုက်ကတ်)တွေ အကုန်လုံး တရားမ၀င်တော့ဘူး။ (ဒီတော့ WC မဲပေးခွင့် အလိုအလျောက် ပယ်ဖျက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။) WC တွေ ပြန်လည်အပ်နှံချိန် မတ်လ ၃၁ မှ မေလ ၃၁ အထိ အချိန်ပေးထားပါတယ်။ WC ကိုင်ဆောင်သူ အားလုံးဟာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနဲ့ အညီ စိစစ်မှု ပြန်ခံရပါမယ်။ ဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်တဲ့သူမှသာ ပန်းရောက်ကဒ် ရမယ်၊ မညီတဲ့သူ မရဘူး။ နိုင်ငံသားစိစစ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးပြတ်ပြီး ဖြစ်မယ်။ မလဲဘူး ဆိုတဲ့သူတွေ မေ ၃၁ ကျော်ရင် ဘာကဒ်မှ မရှိတော့ဘူး။ လဲမယ် ဆိုရင် ဒီကာလအတွင်း လဲရမယ်။ (စိစစ်ပြီးမှ ဥပဒေနဲ့ ညီမှ ကဒ်ထုတ်ပေးမယ်။) ” ဟု ၎င်း၏ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူများသည် ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေးနည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၃၊ နည်းဥပဒေခွဲ (၄) ပါ ပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် လက်မှတ်များ အပ်နှံခြင်း၊ စိစစ်မှုခံယူခြင်း တို့ကို သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေပြဌာန်းချက်များကို လိုက်နာ၍ နည်းလမ်းတကျ ဆောင်ရွက်ကြရမည် ဟု ဖော်ပြထားသည်။
၀ှိုက်ကတ်ကိုင်ဆောင်သူများတွင် ၀၊ ပအိုဝ့် စသော တိုင်းရင်းသားများလည်း ပါဝင်နေပြီး ကိုင်ဆောင် သူ တစ်သန်းကျော်ရှိကြောင်း၊ ရခိုင်တွင် ၀ှိုက်ကတ်ကိုင်ဆောင်သူ ခြောက်သိန်းကျော်ရှိနေပြီး ၀ှိုက်ကတ်ကိုင်ဆောင်သူများကို မဲပေးခွင့်ပျက်ပြယ်အောင်ပြုလုပ်မည် ဆိုပါက ၀ှိုက်ကတ်ကိုင်ဆောင်သူ တိုင်းရင်းသား များ အရေးအတွက် ခြွင်းချက်ဖြင့် မဲပေးနိုင်ရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်၊ မျိုး စောင့်ဥပဒေအတည်ဖြစ်ရေး စသည့် အချက်များကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်က အင်းစိန်ရွာမပရိယတ္တိကျောင်းတွင် ကျင်းပသော အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာစောင့် ရှောက်ရေး အဖွဲ့ (မဘသ) အရေးပေါ်အထူးအစည်းအဝေးတွင် ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
မဘသ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်ဦးတိလောကာဘိဝံသက “နိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်၊ နိုင်ငံသားလည်းဖြစ်ခွင့်မရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဲပေးခွင့်ပေးတယ်ဆိုကတည်းက နိုင်ငံ့သစ္စာဖောက်နေတာပဲ။ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မရှိဘူး” ဟု ဆိုသည်။
“၀ှိုက်ကတ်ကိစ္စမဖြေရင်းနိူ်င်ရင် ၂၀၁၅အတွက် အထွေထွေ ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ဦးဇင်းအမြင်ပြောရရင် ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မျိုးစောင့်ဥပဒေကပိုအရေးကြီးတယ်”ဟု ဆရာတော်ဦးဝီရသူက မိန့်ကြားသည်။
ကိုယ် မသိချင်ယောင် ဆောင် ထားတယ် ~~~~
ပြောင် ရွှေ့နေတဲ့ အကွက် များလည်း ~~~~~~
လူဝင်မှု ဂျီးချွတ်ရေး၊ နိုင်ငံသားဆီးစစ်ရေးက အရာရှိတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေ မေ ၃၁ ထိ လုပ်စားခွင့်ပေးမယ်”” လို့ ပေါဒါယားဟင်???
ဒီချုပ်ဝင်ပြီး ကန်င်ပိန်းလုပ်ဖို့.. ကောင်းတယ်..။